Fa maninona ny masinin-tsiranonao no mahavonjy herinaratra kokoa noho ny milina ranomandry flakes hafa?
Nampiasa firaka volafotsy izahay mba hanafoanana ny ranomandry flake. Ity fitaovana patanty vaovao ity dia manana fitarihana hafanana tsara indrindra. Ny fifanakalozana hafanana eo anelanelan'ny rano sy ny vata fampangatsiahana dia azo tanterahina amin'ny fomba mahomby kokoa, noho izany, ny fanaovana ranomandry dia lasa tena mahomby, ary ny herin'ny vata fampangatsiahana no ilaina.
Ny mari-pana miompana amin'ireo rafitra dia avela ho avo kokoa, toy ny -18C. Ny rano dia mety ho tonga mangatsiaka tsara amin'izany hafanana miakatra izany, raha toa kosa ny orinasa sinoa hafa dia tsy maintsy mamolavola ny rafitr'izy ireo amin'ny hafanana miakatra -22C.
Mitsitsy angovo = Mitsitsy volavolan-dalàna momba ny herinaratra.
Ny milina ranomandry flakes 20T / andro iray dia afaka manampy anao hitahiry hatramin'ny USD 600000 ao anatin'ny 20 taona. Manisa ny herinaratra izahay amin'ny vidin'ny USD 14 isaky ny 100KWH.
Ho an'ny fitsinjaram-pahefana dia mampiasa fitaovana vaovao ianao hanamboarana ny evaporator. Manana fotoana fanompoana maharitra ve ireo fitaovana vaovao ireo?
Ny firaka volafotsy dia vita amin'ny singa maro, ary avo 2 heny mahery noho ny vy karbaona nentim-paharazana.
Aorian'ny fitsaboana hafanana, ireo evaporator miaraka amina fitaovana vaovao dia tsy hanana fahasimbana mandritra ny fotoana maharitra. Nanakarama ekipa matihanina izahay hanao fitsapana tanteraka ao amin'ny Oniversiten-dranomasin'i Zhangjiang. Ary nosedraina an'ity fitaovana ity izahay tamin'ny alàlan'ny milina 1000 mahery eny an-tsena nandritra ny 5 taona.
Ohatrinona ho an'ny milina ranomandry anao
A: Hiresaka momba ny fitakian'ny mpanjifa izahay.
Noho izany ny mpanjifa dia tokony hanome anay ireto fampahalalana manaraka ireto avy eo azonay tononina mifanaraka amin'izany.
1. Inona no karazana ranomandry hatao? Ranomandry flake, ranomandry fantsom-boankazo, ranomandry sakana, sa hafa?
2. Firy isan-taonina ny ranomandry isan'andro, ao anatin'ny 24 ora rehetra?
3.Inona no tena fampiasana ny gilasy? Ho an'ny trondro mangatsiaka, sa hafa?
4. Lazao amiko ny drafitrao momba ny orinasan-dranomandry, amin'izay dia hatolotray anao ny vahaolana tsara indrindra mifototra amin'ny zavatra niainanao.